Jeclaan Marka Ghanna a | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE! Jeclaan Marka Ghanna a | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE!
sheekooyinka tahay mawduuc ciyaarta booska caan ah oo leh tiro ka mid ah boosaska ekayd Kaapelitalo caan ku xeeran. Inta badan boosaska kuwaas oo ku salaysan yihiin hal ekayd ah laakiin waxa haddii ay jiraan waa ciyaar Afyare in qaadataa xubno ka dhan ah sheekoxariirada ugu caansan oo iyaga isku mid ah? Well, halkan Waxay jeelaatay Marka booska Ghanna a by ciyaarta ka talaabsan. Si aad wax badan oo ku saabsan waxan u garan, akhri on.
Jeclaan Marka Ghanna waa a 5 Reel, 3 saf, iyo 20 ciyaarta booska paylines. Waxaad soo duuduubo karaa heerka ugu hooseeya ee 20p per wareejin iyo sidii sare sida 200 £ per wareejin in kulankaan. Si aad u bilaabaan ciyaaro kulankaan waa inaad marka hore oo aad u bet sida aad samayn lahayd in ciyaarta kale booska kasta. Waayo, in, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa saxaafadda kor ama hoos fallaadhood tab Bet Total on hoose ee shaashadda ilaa bet aad u jeclaystay ayaa qarka u saaran. Markaas oo dhan aad ka tagay waa in ay ku dhuftey button wareejin ah.
Ciyaarta leedahay wax badan oo ka mid ah muuqaalada bonus oo bixin badan xad ah halkan aad si sax ah ma filan karto lamoodaa noqnoqda kulankii salka. Sidaa ciyaarta waa mid ka mid ah kacsan, laakiin waxa ay sidoo kale u abaalguda kuwa ciyaaryahan oo samir in ay sugaan ilaa agagaarka muuqaalada bonus ka laado in. Sidaas, waxaa dhaanta inay samir halka ciyaaro kulankaan.
Kabaal ee kabaha, qalcaddii A, A kataaradda dahabka iwm ka samaysan Calaamooyinka qiimaha sare ee ciyaarta halka Calaamooyinka qiimaha hoose waa calaamadaha card dhaqanka. Ciyaarta ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay labo ka mid ah calaamadaha bonus. Iyagu waa calaamad rihii, taas oo ku duurjoogta ah iyo calaamadda kitaabka, oo waa kala firdhi ah.
Astaanta kala firdhiso The dhaqmo sida kiciya a for gunnada ekayd. Waayo, in, aad leedahay si aad dalka 3 ee calaamadda this on duntu ku 1,3 iyo 5. Markaasaa waxaa lagu weydiin doonaa inaad u dhexeeya mid ka mid ah wareeg bonus ka dib dooran.
Rumpelstiltskin Deal Kan sameeyey – Halkan waxa aad ka oo loo bixiyo heshiisyo badan oo ka codsaday in ay qaado hal. Waxaad diidi kartaa ilaa 5 heshiisyo in kulankaan mini.
Rapunzel Free dhigeeysa – A dhigeeysa free duubaan la Prince ku ambadeen wax ka 5. Wuxuu munaaraddii soo fuulaa,, sii kordhaya aad multiplier by sidaas samaynaya.
Saddex Little Doofaaro Free dhigeeysa – Halkan waxa aad waxaa la siiyaa tiro go'an of dhigeeysa free la wilds doofaarka.
Jack iyo Beanstalk ah – Dooro digirta in la sameeyo beanstalk koraan. Oo gaaray top si aad u hesho ukunta goose oo dahab ah.
Dhamaan kulamada mini waa xiiso leh iyo bixiyaan abaalmarino weyn, Halkan waa ay adag tahay si ay u kala dooran. Sidaas, nasiib wacan in!!
Sug, kulankaan ayaa, xitaa more, si ay u siiyaan marka la eego sifooyinka bonus la bonus cirfiid hooyo diin. Tani waa feature a random halkaas oo lagu weydiiyo in aad kala dooran 3 Falag buu si aad u hesho kulanka gunno.
kulan bonus waxay ku saleysan yihiin sheekooyinka dheeraad ah sida Pinocchio oo dalab wilds, dhigeeysa lacag la'aan ah oo ay ka soo gasho gunno ah iwm ekayd.
Xitaa haddii aad scour dhan casinos online, waxaa adkaan doonto in la helo ciyaarta Afyare waa feature more hodan badan Rajadeyda Marka Ghanna a a. Just marka aad bilowdo fikirka ciyaarta uu idin siiyey oo dhan waxa ay leedahay in ay bixiyaan, waxa uu idin siinayo xitaa more. Tani waa Afyare ah in si xaqiiqo ah oo qiimihiisu yahay wareejin ah.